The Voice Of Somaliland: Habeenkii Xasan Ganay iyo London oo uu diiday Cabdilqaadir Jubba iinuu ka soo qayb galo
Habeenkii Xasan Ganay iyo London oo uu diiday Cabdilqaadir Jubba iinuu ka soo qayb galo
(Waridaad) - In muddo ahba waxaa magaalada London ku sugnaa abwaan Xasan ganay oo u yimi inuu ka qayb galo xaflad wayn oo ka dhacday London “Somali Week”. Xasan oo ay Wehelinayeen Abdi Qays, Hadaraawi iyo Gariye. Xafladaas oo aad iyo aad dadka ka soo qayb galay ula dhaceen lana kulmeen abwaano kala duwan.
Waa marki ugu horeysay ee uu xasan Ganay yiimado qurbaha gaar ahaan UK, Xasan Ganay, oo dad badani maqlaan, hase-ahaatee aanay arag ayey nasiib wanaag u noqotay inay la kulmaan.
Xasan Ganay oo ka sheekeeyay Sugaantiisa gar ahaanna heeso badan oo uu leeayahay iyo fanaaniinta qaada heesahaas ee ku soo caan baxay oo ay ka mid yihiin fanaanka weyn, Xasan Adan Samatar iyo A/Qadir Juba......Sii Akhri